Soo-dhawow - Community Health Centers of Burlington
Ku soo-dhawow Xarumaha Caafimaadka Bulshada Vurlington (CHCB). Waxaan siinnaa bukaankayaga adeegyo dhammaystiran oo ah ilkaha, caafimaadka iyo latalinta. CHCB waxay daryeeshaa dhammaan da’ kasta oo ay siisaa daryeelka caafimaadka dumarka (OB) iyo daryeelka uurleyda. Goobahaya kala duwan ayaa dhib-yaraynaya helitaanka daryee kugu habboon adiga iyo qoyskaaga.
CHCB waxay ku siin doontaa adeegyada turjubaanimada oo aan kharash kugu joogin. Haddii aad qabto su’aali ama u baahan tahay caawimo, fadlan kala xiriir Guylaine Daoust 802-264-8166 ama gdaoust@chcb.org
Fadlan wac lambarada soo socda si aad u qabsato ballan:
Liistada xarumahayaga, halkan guji.
Hadafka Xarumaha Caafimaadka Bulshada Vurlington (CHCB) waa kor-uqaadista caafimaadka dhammaan jaaliyadaha aan u adeegno. Waxaan naga go’aan ah siinta daryeel wacan oo leh xushmad iyo kalgacal iyo u-heelanaanta u-adeegista dadka iyada oo aan loo eegin heerkooda maaliyadeed ama xaaladooda nololeed.